SNM iyo Maakhir | allsanaag
SNM iyo Maakhir
Kulankii Odayaashii reer Maakhir iyo Ina Cigaal ee sanadkii 1993.
Sanadkii 1993, ayaa Allah ha u naxariistee Maxamed Ibrahim Cigaal oo xukumayey maamulka SNM , wuxuu magaalada Hargaysa ku casumay Odayaal ka soo jeeda Beesha Warsangeli, si uu uga dhaadhiciyo goosashada ay gobolada Waqooyi kaga go’ayaan Soomaalida inteeda kale. Si uu arintaa uga saxiixdo, una soo jiito Odayaasha Maakhir , ayaa markii ay odayaashii wada kulmeen, wuxuu u balan qaaday dhowrkan mashruuc inuu gobolka Sanaag ka hirgelinayo.
Jidka Geeldoora uu dhisayo
Warshadda Laasqoray oo mar kale ka shaqaysiinayo
Jaamacad uu u dhisayo gobolka Sanaag
Odayaashii Warsangeli, oo hadda intooda badani ay dhinteen Allah ha u wada naxariistee dhamaantood, markii ay ka soo baxeen Xafiiskii Ina Cigaal, oo ay jidka sii hayaan ,una sii socdaan Huteelkii ay magaaladaas ka deganaayeen, Ayaa oday ka mid ahaa Odayaashii Warsangeli intuu istaagay oo ku soo jeestay Odayaashii kale waydiiyey su’aashan . War heedhe Gurigii aynu Ina Cigaal kula kulnay ninka leh ma taqaaniin . Maya ayeey ugu jawaabeen. Anaa idiin sheegayee waxa leh nin Hartiya oo la yiraahdo Morgan. War ma arkayseen meeshii aynu la fadhinay Ina Cigaal daaqaddii ku beegnayd isaga ee jabnayd oo falaaraha qoraxdu ka soo gelayeen. HAA. Ma nimanka daaqaddaa samaysan kari waayey ayaa warshadda Lasqoray inoo dhisaya, War jidkan aynu marayno, oo Jamacoow aad dhowrka mar godadka ka qodan aad ku dhacday aadna ku kufi gaartay, nimanka dhisan kari waayey miyaa inoo dhisaya jidka Geeldoora. Maya, Hadaba gaariga u horeeya oo maalinta beri ah Bari u baxaya aynu raacmo, meeshan sii joogis ma leh.
Labaatan sano ka dib Siilaanyo ayaa ka daba yimid Odayaashii, Isaguna dhagax ayuu dhigay Laasqoray lagu dhisayo Warshadii Laasqoray iyo jidkii Geel doora. Xilkii uu SNM ka hayey waa ka sii dhamaanayaa isaga oo dhagixii uu dhigay dhagax kale ku soo darin
Ugu danbayntii marka danbe ee aad maqashaan Isaaq ayaa Mashaariic ka hirgelinaya Maakhir, waxaad xasuusnaataan inay tahay Marabbi ay degaanka SNM ku hubaynayaan si ay amni daro uga abuuraan. Haday ay dhacdoba inay lacag siyaan Marabidan waa mid beelaha Warsangeli madaxa laysugu dhufanayo
← Reer Yube jidka Ceel Daahirna u diyaar garooba Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galaya caleema-saarka Madaxweyne Uhuru Kenyatta →